Samsung Copilot: ny fampiharana hisorohana ny faharendremana amin'ny kodiarana | Androidsis
Ny iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny lozam-pifamoivoizana dia ny fahantrana. Mpamily maro no matory amin'ny kodiarana. Zavatra mety hitranga aorian'ny fiara mandritra ny ora maro, na aorian'ny fivoahana amin'ny alina. Na dia matory mandritra ny fotoana fohy aza ny olona iray, ny vokany dia mety hahafaty. Sady ho an'ny tena no ho an'ny mpamily na mpandeha an-tongotra hafa. Soa ihany fa misy fepetra ambara fa manampy amin'ireo karazana toe-javatra ireo. Toy ny Samsung Copilot.
Ny orinasa iraisam-pirenena koreana dia nanambola ny teknolojia misy tanjona. Fampisehoana na hevitra vaovao manampy ny olona amin'ny fomba mahasoa. Amin'ity tranga ity dia ataon'izy ireo amin'izany fampiharana izay mitady hisorohana anao tsy hatory amin'ny kodiarana.
Izy io dia fampiharana maimaim-poana ho an'ny smartwatches izay mifanaraka amin'ny mpanamboatra isan-karazany Avy amin'ny tsena. Copilot dia noforonina mba hiaraka amin'ny mpamily sy hahafahany mamantatra sy manaitra mialoha ny amin'ny toe-javatra mety hampidi-doza. Araka ny Ny fahantrana dia tafiditra ao anatin'ny 15% ka hatramin'ny 30% ny lozam-pifamoivoizana ao Espana.
Ka miaraka amin'ny fampiharana iray tahaka izany dia mitady hiady amin'ny iray amin'ireo fahavalo lehibe indrindra ao ambadiky ny kodiarana izay ho hitantsika. Samsung copilot dia mitady hisoroka ny mpamily tsy hatory ary tsy tara loatra amin'ny toe-javatra mampidi-doza. Zavatra mitranga matetika kokoa, indrindra amin'ny vanim-potoana misy dia maro toy ny Krismasy. Daty rehefa be ny olona mamely ny arabe, ary matetika amin'ny alina na vao maraina.
Ny hevitry ny orinasa miaraka amin'ity rindranasa ity dia ny fampahafantarana ireo mpampiasa ny loza mety hitranga amin'ny fitondrana fiara raha reraka. Noho io antony io dia nanangana fampielezan-kevitra ny orinasa volana vitsivitsy lasa izay tamin'ny fiheverana «Tsy azonao resena ilay nofy. Fanentanana izay mitady hifanohitra amin'ny kolontsain'ny "azo atao ny zavatra rehetra". Araka ny mpampiasa maro no mieritreritra fa tsy misy na inona na inona mitranga na hoe afaka miaritra mandra-pahatongany any amin'ny toerana halehany. Noho izany, ampahafantarina ireo mpampiasa fa ny mitondra fiara miaraka amin'ny hamamoana dia tsy hoe tsy azo atao fotsiny, fa koa mitondra risika maro. Na ho anao sy ho an'ny olon-kafa.
1 Samsung Tanjona Technology
2 Miadia amin'ny torimaso amin'ny kodiarana
3 Samsung mpiara-manidina
Samsung Tanjona Technology
Ny Samsung's Purpose Technology dia hetsika novokarina tany Espana. Ny tena tanjon'izany dia ny manatsara ny fiainan'ny olona. Mba hanaovana izany dia mitady hamaky ny sakana amin'ny fampiasana teknolojia izy. Mba hahatratrarana izany, ny orinasa dia manolotra andiana hetsika izay mitady hamaha ireo olana mifandraika amin'izany misy fiatraikany amin'ny olona maro izany. Saingy, ireo vahaolana ireo dia iraisan'ny rehetra sy maimaim-poana. Mandrak'izao fandraisana andraikitra isan-karazany no natomboka ao anatin'ity teknolojia misy tanjona ity toa ny "Dytective ho an'ny Samsung«, Fampiharana iray izay manampy amin'ny famaritana dislexia na«Cap»Satroka milomano ahafahan'ny mpilomano miodina irery.
Miadia amin'ny torimaso amin'ny kodiarana
Ny fahantrana amin'ny kodiarana dia mety hitranga amin'ny fotoana rehetra, fa amin'ny ankapobeny dia misy fehezam-potoana roa ahitana azy mora kokoa. A zavatra voalohany amin'ny tolakandro (mihoatra na latsaka eo anelanelan'ny 14 sy 16 hariva) ary mandritra ny maraina (eo anelanelan'ny 3 sy 5 maraina). Ireo izay mandany fotoana bebe kokoa ao ambadiky ny kodiarana amin'ny asa dia inoana fa hijaly amin'ity olana ity. Na dia, araka ny fanadihadiana aza, 55% amin'ireo mpamily espaniola no manohy mitondra fiara na dia mijaly amin'ny hamamoana aza izy ireo, miaraka amin'ireo loza aterak'izany.
Ny risika ho an'ny mpamily dia mitombo amin'ny daty manokana mandritra ny taona. Araka ny efa nolazainay, iray amin'ireo fotoana mety ahiana indrindra dia ny Noely. Ireo no daty anaovana dia amin'ny fiara maro. Mieritrereta andro toy ny Alin'ny Krismasy, Andro Krismasy, Taom-baovao, Taom-baovao na Mpanjaka telo. Araka ny mazàna dia manana fivezivezena marobe izy ireo.
Ireo tolo-kevitra dia ireo mahazatra ao amin'ity karazana tranga ity. Mila miala sasatra tsara ianao alohan'ny handehanana mitsangatsangana. Tsara koa ny misoroka ny ora mampidi-doza indrindra na ny dia lavitra amin'ny alina. Ary tsy maintsy miala sasatra isaky ny adiny roa na 200 kilometatra. Ho an'ny fiara dia mandehana mitsangantsangana ary misotroa rano na kafe, ny zava-pisotro misy kafeinina dia tsara hampifoha anao hatrany. Milamina sy mailo hatrany ianao. Ny firesahana amin'ireo mpandeha hafa mandritra ny dia na ny fitendrena mozika dia manampy koa tsy hatory.
Ankoatra ny tolo-kevitra mahazatra efa fantatry ny ankamaroan'ny mpamily dia manatevin-daharana ihany koa i Samsung Copilot. Ny fampiharana dia mikendry ny hisorohana ny fahamendrehana amin'ny kodiarana. A) Eny, azo ahena ny isan'ny lozam-pifamoivoizana. Indrindra ny isan'ny lozam-pifamoivoizana maty. Ny fampiharana dia novolavolaina miaraka ny Vondron'ny Fikarohana notarihin'i Prof. Sergio Ríos, avy amin'ny Sekoly Ambony momba ny injeniera sy ny haitao ao amin'ny Oniversite Iraisam-pirenena ao La Rioja (UNIR).
Ny zavatra ataon'ny Samsung Copilot dia ny mianatra ny fomba fitondra-dàlan'ny mpampiasa hanatsarana ny fahamarinan'ny fampitandremana. Noho izany dia hanoratra ireo fambara ilaina amin'ny mpamily amin'ny fitsaharana izy. Izy io koa dia mitahiry fifandraisana avy amin'ny telefaona hampiasaina amin'ny toe-javatra maika. Hampiasaina hiantsoana raha ilaina izany. Vantany vao vita ny mombamomba azy ary arakaraka ny fihetsiky ny sandrin'ny mpamily, ny algorithm dia handinika ny angona avy amin'ny sakan'ny fiambenana. Izy io dia handrefesana ny pulsa, hampiasa gyroscope sy pedometer koa izy, sns. Amin'izao fomba izao, noforonina ny piraofilina iray ny mpamily sy ny fomba fanaony ao ambadiky ny kodia. Inona no hanampy antsika amin'ny ho avy.
Misaotra ireo angona nangoninao, ny fampiharana dia ho afaka mamantatra rehefa matory ilay mpampiasa. Satria ho afaka izy ireo mamantatra ny fiviliana amin'ny lamina izay efa voasoratra anarana. Araka izany, rehefa ao anaty fahantrana ny mpampiasa alohan'ny hatory (nefa tsy matory tanteraka) dia hanao izany izy ireo manangana fanairana. Handeha ny fanairana alefaso amin'ny alàlan'ny vibration. Koa satria amin'ireo karazana toe-javatra ireo dia ny hovitrovitra no fomba tsara indrindra hahatongavana ho mailo indray (raha ny fanadihadiana natao). A) Eny, hiverina amin'ny fanjakana mahazatra ny mpampiasa, ka hialana amin'ny lozam-pifamoivoizana. Noho izany dia azonao atao ny mampiato ny fiara rehefa afaka kelikely ary mandray fepetra hanoherana ny hamamoana. Tsy isalasalana fa Hitantsika fa manampy amin'ny famonjena ain'olona ny Samsung Copilot. Azonao atao ny misintona ny fampiharana etsy ambany:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Samsung copilot: ny fampiharana manakana anao tsy hatory amin'ny kodiarana
Hiala amin'ny sigara aho !!. Miara-manao izany ve isika?